လင်္ကာ: ကိုမောင်မောင်ဝမ်းက..မရှိမဲ့ရှိမဲ့.ဒီခေါင်းဆောင်ပြိုသွားရင် ဘယ်သူ့ကိုအစားထိုးမလဲ? ခေါင်းဆောင်နောက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်ကြပါတဲ့
ကိုမောင်မောင်ဝမ်းက..မရှိမဲ့ရှိမဲ့.ဒီခေါင်းဆောင်ပြိုသွားရင် ဘယ်သူ့ကိုအစားထိုးမလဲ? ခေါင်းဆောင်နောက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်ကြပါတဲ့
မူအရလည်း မှန်တယ်..ယုံကြည်ချက်အရလည်းမှန်တယ်..ဒါပေမဲ့ လုပ်သင့်တယ် လို့ထင် လို့ ဒါတွေ ကို ကျောခိုင်းပြီး (သမိုင်း နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်သွား မှာစိုး လို့၊တိုင်းပြည် နာမှာကြောက် လို့ထင်ပါရဲ့)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLDဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်ပေမဲ့ မကန့်ကွက်ဘူး.. မရှိမဲ့ရှိမဲ့.ဒီခေါင်းဆောင်ပြို သွားရင်... ဘယ်သူ့ကိုအစားထိုးမလည်း...
.ခေါင်းဆောင်က လုပ်သင့်တယ် ထင်လို့ လုပ်တဲ့ ကိစ္စ အားလုံးက တညီတညွတ်လိုက်ဘို့ပဲရှိတာပေါ့.. တိုင်းပြည်နာနေတာကို ခံယူချက်စတေးပြီး ကျော်ဖြတ်လိုက်ရတာအတွက်...ထိုက်သင့်တဲ့ တန်ဘိုး တစုံတရာတော့...ရှိလာမှာ ပါ...လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ လည်း... တဘက်ကအလျှော့ပေးလိုက်တာကိုဟုတ်ပြီကွဆို.. .ရောင့်တက်တဲ့လုပ်ရပ် ကိုတော့ ရှောင်ဘို့လိုလိမ့်မယ်...မြန်မာတွေဟာ...ရုပ်ရှင်ထဲမှာတောင်. ..မင်းသားက..လူကြမ်းကို မတရားနှိပ်စက်လာရင်...မင်းသားကို မုန်းတဲ့ အမျိုး။
ဟာ.နှိမ့်ပေးလိုက်သလိုလိုနဲ့.. ..လှံသွားထက် စူး တယ်နော်။ ဒီစကားဟာလက်ရှိအစိုးရအတွက် အနိုင်ကျင့်လွှမ်းမိုးဘို့ကြိုး စားလာရင်....မိုးကြိုးသွားဖြစ်လိမ့်မယ်)...။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောလာပြောလာ. ဘယ်လိုပဲ ရှုတ်ချ ရှုတ်ချ.. .ခေါင်းဆောင်နောက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်ကြပါ......။
အန်တီစုကို ယုံကြည်ပါတယ်...မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မရှိမဲ့..ရှိမဲ့ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ပါ...။ ကိုမောင်မောင်ဝမ်းရဲ့..ပြောဆိုမှုကိုထောက်ခံပါတယ်..။